सुत्ने बेला किन ब्रा खोलेर सुत्ने? नखोल्दा के हुन्छ ? हरेक महिलाले जान्नै पर्ने ! – Sandesh Press
June 11, 2021 7782
उनको मृ’त्यु अगाडी उनले यस्ता केहि आधारहरु समेत छाडेकी छिन जसलाई प्रमाण मानेर हेर्दा सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ, उनि माथि आफ्नै परिवारले मा’नसिक या,तना दिइरहेको थियो । परिवारमा स’सुराले धेरै या’ताना दिएपछि श्रीमानलाई भन्दा उनको कुरा सुनेका थिएनन। हेर्नुहोसयो पनि पढ्नुहोस
Prevतुलसीपुरमा अमिन माथि चलाइयो गो ली, गाउँलेको भागा-भाग
अभिनेत्री रेखा थापाले गरिन् इजरायलमा बसोबास गर्ने यी युवकसंग विवाह